Yersiniosis (Infekshanka Yersinia ee Mindhicirrada)
Author Topic: Yersiniosis (Infekshanka Yersinia ee Mindhicirrada) (Read 14538 times)
« on: December 23, 2010, 07:56:02 PM »
Yersiniosis-ka waa infekshan mindhicirrada (caloosha) gala oo u keenay baktiiryada (jeermiska) loogu yeero Yersinia enterocolitica.
Baktiiryada waxaa laga helaa saxarada dadka iyo xayawaanka, qaasatan qaansiirka.
Yersinia enterocolitica badanaa waxaa ay saameysaa carruurta.
Calaamaadka caadiyan waxaa ay billawdaan 3 illaa 7 cishood kaddib marka laga ag dhawaado waxaanna ka mid ah:
Calaamaad kale sida lalabo ama matag
Mararka qaarkood calaamaad ma laha, balse saxarada ayeey baktiiryada soo raaci kartaa. Dadka aan qaadan daawada antibiyootikada waxaa ay baktiiryada saxaradoodaa ku jiri kartaa 2 illaa 3 bilood, xittaa haddii aanney calaamado qabin.
SIDEE BAY YERSINIA U FAAFTAA?
Dadka waxaa ay infekshanka ka qaadi karaan cunnada halaysan, qaasatan qaansiirka cayriinka ah ama aan si fiican loo karin, caanaha aan la karin, iyo iyagoo ka ag dhawaada xayawaanka qaba ama biyo halaysan.
Dadka qaba ee aan gacmahooda si fiican u dhaqin kaddib marka ay isticmaalaan suuliga waxaa ay infekshanka u gudbin karaan dadka kale.
GARASHADA CUDURKA IYO DAWAYNTA
Baktiiryada waxaa lagu garan karaa baaritaanka saxarada.
Xaaladaha daran, takhtar ayaa u qori kara antibiyootic lagu daweeyo infekshanka Yersinia.
Ha cunin hilib qaansiir.
Waxaad cabtaa oo keliya caanaha la kariyey iyo alaabta laga sameeyo.
Gacmaha ku dhaq saabuun iyo biyo inta aadan cunnada cunin amaba diyaarin, marka aad xoolaha ka ag dhawaato, iyo marka aad hilib taabato.
Marka aad calooleyda taabato, gacmaha iyo cijiyaha isaga dhaq saabuun iyo biyo inta aadan taaban dhallaanka ama alaabta ay ku ciyaaraan, dhalooyinka, ama waxyaabaha afka loo geliyo.
Haddii aad diyaariso calooley, ha taaban carruurta amaba ha diyaarin cunnadooda inta aad calooleyda ku hawlan tahay.
Isticmaal meel ka duwan meelaha aad ku goyso cunnada kale iyo hilibka.
Si taxaddir leh u nadiifi meelaha aad ku goysay, miiska dushiisa iyo maacuunta adigoo isticmaalaya saabuun iyo biyo kulul marka aad diyaariso kaddib.
Si nadaafad leh u tuur saxarada xayawaanka.
Haddii aad su'aalo ka qabtid qoraalkaan, hoos ku weydii su'aashaada
Views: 21175 November 20, 2018, 03:32:30 PM
Views: 37345 February 14, 2016, 05:09:31 PM
Su'aal: Waxaa layga qabtaa qeybta hoose ee mindhicirrada?
Started by JanaaleBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 3144 June 09, 2018, 07:48:38 PM
Views: 49844 May 06, 2011, 07:55:37 PM
Infekshanka laga qaado Isbataallada
Views: 17764 November 10, 2010, 07:41:32 PM